Sida loo daro luqadaha cusub si aan kaagala hadlo Google Assistant | Androidsis
Sida loogu daro luqadaha Google Assistant
Kaaliyaha Google wuxuu awood u leeyahay inuu ku hadlo luqado badan, xitaa wuxuu ku hadli karaa laba luuqadood isla waqti isku mid ah, ama fahan. Sidaa darteed, haddii aad ku hadlayso laba luuqadood ama aad rabto inaad awood u yeelato inaad ku tababarto luuqad kale kaaliyaha taleefankaaga Android, waxaad fursad u leedahay inaad ku darto luuqado cusub oo aad kula hadli karto. Tani waa mid aad u fudud.
Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad kula hadasho Kaaliyaha Google taleefankaaga Android adoo adeegsanaya mid ka mid ah luqadahaas, markaad weydiinayso ama amar siineyso kaaliyaha. Marka waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo aqoontaada loogu dhaqmo luqaddaas.
Tallaabooyinka kiiskan ayaa la mid ah inuu ka yeelo inuu magac kale noogu yeedho. Marka hore waxaan fureynaa Google Assistant taleefankeena Android. Marka tan la sameeyo, dhagsii astaanta ka muuqata bidixda hoose ee shaashadda, taas oo noo geynaysa shaashad cusub. Halkan waxaan ku gujineynaa sawirkeena astaanta, si aan u galno goobaha.
Marka, waxaan tagnaa qaybta kaaliyaha, oo aan ku hayno tabsyada sare. Qeybtaan gudaheeda aan aragno in xulashada koowaad ay tahay Luqadaha, oo aan ku riixno. Halkaan luuqadda ama luqadaha aan horay ulahadalnay kaaliyaha ayaa lasoo bandhigi doonaa.
Marka xiga waa inaan ku darnaa luqadaha aan rabno, kaas oo aan awoodi doonno inaan kula hadalno Kaaliyaha Google. Liiska luqadaha ee kaaliyaha fahmayo aad ayey u ballaadhan yihiin macnahan, sidaa darteed waxaan heli doonnaa xulashooyin badan oo aan ka kala xulanno kiiskan. Marka waad ku dari kartaa wax kabadan hal kiiskan.
Mar alla markii lagu daray, waanu ka bixi karnaa qaybtan hadda. Marka xigta ee aan u adeegsanno Kaaliyaha Google ee Android, waan ku weydiin karnaa ama waxaan kugu amri karnaa mid ka mid ah luqadahaas. Marka way suurtagal noqon doontaa in sidan loogu xakameeyo. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku badali karnaa luqadaha wadahadalka dhexdiisa. Saaxirku wuxuu badali doonaa luqadaha sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loogu daro luqadaha Google Assistant
Naqshadda sare ee Vivo Nex 3 iyo muujinta qalooca ayaa si buuxda loogu qabtay sawir